အသီးဘက်ထရီ — Seadstem – Southeast Asian Digital
စွမ်းအင် သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းခြင်း ရေရှည်တည်တံ့မှု
ဤလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ကျောင်းသားများသည် သတ္ထုနှင့် ထိတွေ့ပြီး သစ်သီးများဖြင့် လျှပ်စစ်အား မည်သို့ထုတ်လုပ်ရမည်ကို လေ့လာနိုင်ပါမည်။ pH နှင့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း အကြား ဆက်သွယ်ချက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် လူတိုင်း တက်နိုင်ပြီး ယုံကြည်ရသော ခေတ်မှီစွမ်းအင် ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲနိုင် သင့်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဥ်ဘဝတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကမ္ဘာရဲ့ အချို့နေရာများတွင် လျှပ်စစ် မီးပြတ်တောက် ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတွေသည် စျေးကြီးလွန်းလှပါသည်။ဤအရာသည် ပြသနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျောင်းတွေကိုလည်းလျှပ်စစ်မီးလုံ‌လောက်စွာပေးနိုင်ချေ။ ထိုကြောင့် ဘဝလူနေထိုင်မှုကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်တော်များများသည် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သမာရိုးကျမဟုတ်ပဲ ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရှာဖွေနေကြသည်။
အချို့သော အသီးသည် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား ? ဤဖြစ်စဥ်ကို အသီးမှ ဓာတုစွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲပြီး လျှပ်စစ်စီးကြောင်းထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ လူသိများသော အသီးဖြင့် ဥပမာပေးရလျှင် လီမွန်နှင့်အာလူးတို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ဤလုပ်ဆောင်ချက်တွင်
ကျောင်းသားများသည် အသီးကို သတ္တုနှင့် ထိတွေသောအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဘယ်လိုထုတ်ပေးသလဲဆိုတာ သင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့သည် pH နှင့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းကြား နှင့် အနီရောင် LEDမီးလင်းဖို့ရန် လိုအပ်သောအသီးအရေအတွက်တို့ ဆက်သွယ်ချက်များကို လေ့လာကြရပါမည်။ ထိုစိတ်ကူးနှင့်အတူ ကျောင်းသားများသည် သူတို့နယ်မြေပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးလက်တောနယ်ရှိ ကျောင်းများနှင့် အိမ်များသို့ တက်နိုင်သောလျှပ်စစ်မီးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အဖြေကို တင်ပြပါလိမ့်မည်။
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးအသီးကို ခွဲထုတ်ပြပါ။
အသီး၏ pH နှင့် လျှပ်စစ်လျှောက်ကူးသတ္တိ အကြားဆက်သွယ်ချက်ကို ခွဲခြားပြပါ။
စမ်းသပ်ချက်မှရရှိသောစိတ်ကူးဖြင့် ကျေးလက်တောရွာ ကျောင်းနှင့် အိမ်များအတွက် စွမ်းအင် ကို တက်နိုင်သည့်လျှပ်စစ်မီး ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စိတ်ကူးကို တင်ပြပါ။
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်အသီးသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည်နည်း?
အနီရောင် LEDမိးထွန်းလင်းဖို့ရန် အသီးအရေအတွက် မည်မျှလိုအပ်မည်နည်း?
pH နှင့် လျှပ်စစ်စီးကူးအကြား ဆက်သွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း?
ဤစိတ်ကူးသည် ကျေးလက်ကျောင်းနှင့်အိမ်ားများ လျှပ်စစ်မီးရရှိလည် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း?
Photo: © iStock onlyyougj
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက် <--> မော်တာ